Jereo manodidina ny Apple Maps mahatratra tanàna eropeana sasany | Avy amin'ny mac aho
Ny mpampiasa sasany any Polonina dia nitatitra fa nahita ny fiara Apple any izy izay natokana handray sy haka sary eny amin'ny arabe miaraka amin'ny tanjona hampidirana azy ireo amin'ilay antsoina hoe Jereo ny manodidina. Ny orinasan'ny California dia nanamafy fa tena eo tokoa izy ireo ary ho eo mandra-pahatongan'ny volana aogositra 2021. Toa toa tsy ho ela dia hanana ny asany i Polonina.
Araka ny tranonkala ofisialy avy amin'ny Apple Maps Image Collection mampiseho fiara fitaterana sary Apple Maps. Trano azo jerena manodidina Hatao any Polonina hatramin'ny Aogositra amin'ity taona ity izy ireo. Ilay tranonkala ihany dia manondro fa nanomboka nanadihady vondronà firenena sy tanàna eropeana ny Apple Maps, ao anatin'izany i Czechoslovakia, Alemana, Slovenia, ary Kroasia. Ny fizarana dia naseho voalohany niaraka tamin'ny fanavaozana ny iOS 13 tamin'ny taona 2019 ary izahay dia efa nitatitra ny fampiasana azy fa any Etazonia foana. Toa anjaran'ny kontinanta taloha.
Tsy fantatra mazava hoe rahoviana no mety halefa mivantana ho an'ny mpanjifa Apple Maps ny sary vaovao eny an-dalambe. Tamin'ny Mey 2021, ohatra, dia natomboka tao Atlanta, Georgia ny Look About. Manangona angon-drakitra Look About any Hong Kong ihany koa ilay orinasa. Jereo ny manodidina dia ny an'ny Apple an'ny Google Street View izay mamela anao hanakorisa 360 degre ary hamakivaky ny arabe. Raha manana angon-drakitra Look manodidina momba ny toerana hitanao izao ny Maps, dia mila fotsiny izany tsindrio ny kisary binocular amin'ny sarintany na karatra fampahalalana hanombohana traikefa 3D mifandraika.
Este tranonkala Apple dia mitazona ny lisitry ny tanàn-dehibe sy firenena misy ny Look manodidina. Ho hitanao, Voatanisa ao amin'ny tsanganana Standard Maps i Espana. Tsy maintsy manohy miandry ny fiara Apple handalo ny firenentsika isika ary hisambotra ny arabe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Jereo manodidina ny Apple Maps mahatratra tanàna eropeana sasany
Efa mandalo an'i Espana ny fiara. Tamin'ny herinandro lasa aho nahita iray teny amin'ny arabe iray any Valencia.
Fampivoarana iWork hanampiana ny mpampianatra sy ny mpianatra